Ahoana ny fomba hanafoanana ny habaka amin'ny Android hahazoana fampisehoana tsaratsara kokoa | Androidsis
Google | | Fampiharana Android, About us, Tutorials
Izay mpampiasa Android mahazatra dia ho mahatsikaritra fa rehefa ampiasaina sy fenoina ny angona dia mihena mifanindry ny fahombiazan'ny terminal. Na dia marina ihany koa fa eo am-piandohana ity OS ity dia manana valiny tsara amin'ny fitehirizana angona, fa amin'ny fotoana iray dia hitantsika ny fomba milatsaka mafy ny fampisehoana ary mitombo.
Araka ny fantatsika rehetra, ny lamaody sinoa dia lamaody tato ho ato. Ny ankamaroan'ireny terminal ireny dia tsy dia misy fahatsiarovana anatiny loatra, noho izany dia miaraka amina karatra SD ho famenony hampitombo ny fahatsiarovana ny terminal. Na dia mety ho toa ampy aza izany, ny marina dia amin'ny farany a fampiasana mitohy sy maharitra ny smartphone mitaky famenoana telefaona amin'ny angona tsy ilaina. Hiverina any manome ny terminal anay misy fluidity sy fampisehoana voalohany Tokony hofafantsika ny angona rehetra manelingelina antsika na tsy ilaintsika.
Avy eo manazava aho ny fomba tsara indrindra anaovana azy satria tsy misy angona angona amin'ny endrika sary na antontan-taratasy fotsiny. Ao amin'ny halalin'ny fitaovanao dia misy fisie junk izay tena tokony hamafana ary tsy mahazo aina ny priori fafao amin'ny tanana.
Fampiharana hanafoanana toerana
Ny fampiharana default izay ampiasain'ny mpampiasa maro dia FileHog. Ity fampiharana tsara ity dia mamakafaka ny fitaovanao ary mahita ireo rakitra lehibe indrindra sy tsy ilaina indrindra izay efa notehirizinao tao amin'ny terminal anao. Mora sy be intuitive izy io, fa raha sanatria ka hamboarintsika tsikelikely izy io mba tsy hanao fahadisoana.
Pikantsary amin'ny interface interface utama an'ny FileHog.
Tokony hampidinao mivantana avy hatrany amin'ny Google Play izany. Vantany vao misokatra ny fampiharana, ny fisie azo alefa amin'ny fitaovana. Midika izany fa Tsy tokony hofafanao ny fisie izay miseho aloha ao amin'ny fampiharana.
Ao amin'ny tontonana ankavia Afaka misafidy sokajy ianao, toy izao ny fisie hamafana mifanaraka amin'ny sokajy voafidy.
Raha vao voafantina ilay rakitra dia tsy maintsy kitiho ny safidy hamafana izay holazain'ny app aminay. Raha irinao alao sary an-tsaina ny habakabaka nafahana vantany vao mamafa ny rakitra rehetra ianao, mankanesa any amin'ny kiheba "mari-pandrefesana”. Hiseho ny varavarankely toy ny sary etsy ambany, mampiseho anao Firy ny Bytes data izay nofafanao?.
FileHog dia mampiseho amintsika ny habaka malalaka.
FileHog: Controller rakitra
Developer: Trano Jason
Amin'ny maha safidy faharoa anao, saingy tsy dia kely loatra ny ilany azy, dia atoroko ny fampiharana Ilay mpanadio. Toy ny fampiharana teo aloha dia mamakafaka ny habaka ampiasain'ny fisie taloha, toa ireo ananantsika ao anaty lahatahiry vonjimaika toa ny «Downloads«. Ary koa mianatra cache toerana lany ireo rindranasa, ahafahantsika manafoana ireo izay tsy mahasoa antsika intsony amin'ny ho avy.
Afaka manao izany koa isika fehezo ny fahazoan-dàlana alefa amin'ny fampiharana tsirairay, manamarina ny fampiasana angona an'ny tsirairay. Fepetra tena ilaina hijerena raha malware na tsia no napetraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Tutorial- Ahoana ny fomba hanafoanana ny habaka amin'ny Android hahazoana fampisehoana tsaratsara kokoa
Ny taranaka faharoa an'ny Moto 360 dia mandalo ny FCC